Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Reiss Nelson Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Banyere Ndụ Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Reiss Nelson na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-ewetara akụkọ ihe mere eme nke Football Genius kachasị mara aha "Reiss". Anyi bidoro na mbido ya rue mgbe ama bekee na boolu.
Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ndụ Reiss Nelson's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ndụ na mbilite nke Reiss Nelson.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị ntorobịa ahụ na-atọ ụtọ ka ha si n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal pụta. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Reiss Nelson nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Reiss Nelson nke nwata - mmalite ndụ ya na ezinụlọ ya:
Na-amalite, aha ya niile bụ Reiss Luke Nelson. A mụrụ Reiss Nelson na ụbọchị 10 nke Disemba 1999 nye ndị mụrụ ya- nna Zimbabwe na nne nne Bekee na mpaghara Central London nke Elephant na Castle, England.
Reiss Nelson esighi na ezi na ụlọ etolite. Ọzọkwa, ọ abụghị ụdị nwatakịrị ahụ ndị nne na nna nwere ike inye ya ụdị nchịkọta ụmụaka ọhụụ ma e wezụga bọl.
Nwatakịrị ahụ toro na nne na nna ya na nwanne ya nwoke okenye na Aylesbury Estate. Thelọ ahụ gbasapụtara dị n'okpuru ebe a bụ ụwa (nke dị iche kpamkpam) site na mpaghara ego na-eto eto nke na-achịkwa mbara igwe London.
Nke a bụ Aylesbury Estate ebe Reiss Nelson toro.
Akụkọ banyere issmụaka Reiss Nelson - Ọzụzụ na illọ Ọrụ:
Iji gbochie ọnyà nke ndị omempụ na mpụ mma, Reiss nne na nna kpebiri iziga nwa ha nwoke na London Nautical School dị nso na Waterloo.
Na mbido, enweghi obi abụọ ọ bụla na Nelson na-aga n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ nwata nwere ọgụgụ isi nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na agụmakwụkwọ ma na-egwu bọọlụ mgbe oge gụsịrị akwụkwọ.
Banyere ihe omume ụlọ akwụkwọ, Reiss ezughi oke n'enweghi ezigbo enyi ya ka ya na ya gbaa bọọlụ. Ezigbo enyi ahụ abụghị onye ọzọ Jadon Sancho- Ehee, ị nụrụ nke ahụ !. Sancho onye nne na nna ya biri na Guinness Trust Buildings nke dị n'akụkụ Kennington Park abụwo ezigbo onye enyi kemgbe ha bụ nwata.
Ị maara?… Ọ bụ n'ụlọikpe a na-agba bọl na Reiss na ezigbo enyi ya Sancho ji ikike ha dị ka ụmụ nwoke. Mmepe a mere ka a na-akpọ ha asọmpi ụmụaka South London.
Ma Reiss Nelson na Jadon Sancho bụ Ezigbo Enyi.
Dabere na SkySports. Na mgbede mgbụsị akwụkwọ oyi na ndịda London, ụmụ nwoke abụọ (Sancho na Reiss Nelson) na-egwuri egwu na asọmpi nke ndị Fans. Holmes-Lewis, onye nchịkwa egwuregwu na onye ndụmọdụ kwupụtara ihe ọ hụrụ;
"Mgbe m rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ahụrụ m ka nwatakịrị a na-atụgharị 30-yad ma gafere ebe ọzọ gafere nwa nwoke ọzọ (Jadon Sancho) bụ onye weghaara ya ozugbo.
Na nzaghachi, m jidere ndị nkụzi m abụọ, Cedric [Kobongo] na Ahmet [Akdaj] ngwa ngwa wee sị, 'see hụrụ nghọta telepathic ahụ? Nke ahụ bụ nzuzu !!"
Ha abụọ Reiss Nelson na Jadon Sancho mechara nyere ndị otu ha aka merie asọmpi a, ihe omume Holmes-Lewis nke masịrị ya.
Reiss na Sancho na asọmpi ụmụaka South London. Ebe E Si Nweta nye SkySports
Akụkọ Reiss Nelson nke nwata - Ndụ Ndụ Mmalite:
Inwe ihe ịga nke ọma na football mpaghara mere ka ọ kpọọ na Moonshot, bụ ụlọ akwụkwọ ntorobịa nọ n'ógbè ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ bụ Tottenham gụrụ ya.
Reiss nọ na Tottenham otu ọnwa tupu ọkpụkpọ na-enweghị ike isi na Arsenal bịa. Ezigbo enyi ya Sancho natakwara oku na Watford.
The ahuhu ma Reiss na Sancho Ọ bụrụ na football hụrụ ha n'afọ 2007, na-agafe ọnwụnwa ma na-abanye n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke Arsenal na Watford n'otu n'otu. Malite ndụ ya na agụmakwụkwọ abụghị ihe dị mfe maka Reiss.
N'oge ahụ, ọ ga-eteta n'isi ụtụtụ iji ụgbọ oloko gaa Catford ya na nwanne ya nwoke nke okenye. O mere nke ahụ ugboro atọ n'izu.
Enweghị ohere ma ọ bụ igbu oge ọ bụla nwere ike ibelata ọbụbụenyi dị n'etiti Reiss na Sancho. O were naanị nkeji 38 n'ụgbọ okporo ígwè na nkeji 52 n'ụgbọala ka ụmụ nwoke abụọ hụ ibe ha.
Mgbe ọ dị afọ 14, na Machị 2015, Jadon Sancho kwagara Manchester City. Reiss Nelson gara n'ihu na-enwe ọganihu na Arsenal dịka ya gbagoo n'obere oso oso.
Reiss Nelson Biography Eziokwu - tozọ A Ma Ama Akụkọ:
N'ịbụ onye gbagidere n'ọkwa agụmakwụkwọ ahụ, Reiss nyere ya nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya site na Arsene Wenger na 17th ụbọchị ọmụmụ ya.
N'ịchọ inweta oge ịgba egwu, Reiss mere mkpebi dị oke mkpa banyere ọrụ ya. Jadon Sancho onye mechara pụọ ​​na Borussia Dortmund na Germany dụrụ ezigbo enyi Reiss aka ka ọ sonyere ya na German Bundesliga.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ Bekee kpebiri ịgbaso nzọụkwụ ezigbo ndị enyi ya site na ịga mbinye ego iji kpọọ 1899 Hoffenheim, otu ụlọ ọrụ German na ngalaba mbụ nke German. Dị ka Borussia Dortmund maka Jadon Sancho, Hoffenheim nyekwara Reiss Nelson ikpo okwu iji gosipụta onyinye ya.
A na-eme Reiss Nelson otu oge dị ka onye England kachasị ama ama na Europe na ihe mgbaru ọsọ 6 na egwuregwu 7, na-atụle nkeji 54 ọ bụla na nkezi. Dị ka a hụrụ n'okpuru, ọbụnadị Raheem Sterling ọbụnadị Harry Kane nwere ike iti nke ahụ.
Okporo Roadzọ Rees Nelson Akụkọ Mere Eme.
Reiss Nelson Biography - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Mmetụta Nelson na Hoffenheim mere ka ọ nweta nkwalite nye U21 England. Ọ kpaliri Unai Emery iji cheta nwata.
Àgwà ndị ahụ o nwere– nkwenye onwe ya, ọnụego ọrụ na mkpebi siri ike - nke pụtara ìhè na Hoffenheim ejirila Arsenal rụọ ọrụ ya nke ọma.
Rees Nelson Rise to Akụkọ.
Reiss Nelson onye ghọrọ onye ọkpụkpọ 844 nke na-anọchi anya ndị otu mbụ Arsenal nwere n’enweghi obi abụọ egosipụtara Fans na ọ bụ nkwa mara mma mara mma nke ọgbọ bekee nke klọb. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Reiss Nelson Lovehụnanya Ndụ - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwa?
Site na ịrị elu ya, ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ndị egwu bọọlụ Arsenal ga-echerịrị ọnọdụ mmekọrịta ya na nke a na-ajụ ajụjụ a; ''Ọnye na-bụ Reiss Nelson's Girlfriend?'.
Ee!, Ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọmarịcha mma ya na ụdị egwuregwu ya agaghị eme ka ọ nwee mmasị na ụmụ nwanyị.
Ọnye na-bụ Reiss Nelson's Girlfriend?
Dị ka n'oge ederede, ọ ọ ka lụrụ di ma ọ bụ nwunye na o yiri ka ọ lekwasịrị anya n'ọrụ ya. Na-ekpe ikpe site na ụdị ndụ ọ dị ugbu a nke pitch, ọ dị ka Reiss bụ dị njikere ịgwakọta.
Ienwere ike na ọ nwere enyi nwanyị mana ọ jụrụ ịme mmekọrịta ya na ọha ya, opekata mpe ugbu a.
Reiss Nelson Ndụ Nke Onwe:
Tomata ndu onwe onye Reiss Nelson g’enyere gi aka inweta ihe nlere nke oma banyere onye ya. Na-amalite, ọ bụ nwoke dị jụụ nke hụrụ igosipụta ịdị umeala n'obi n'etiti ama ama nke bọọlụ nke oge a.
Tomata Reiss Nelson Ndụ Nke Onwe.
Reiss Nelson bụ onye nwere ike ịgbanwe echiche ya ka ọ bụrụ omume doro anya ma mee ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ime iji nweta ebumnuche ya.
Reiss Nelson Ndụ Ezinụlọ:
Reiss Nelson, ọ bụ ezie na amụrụ ya na England ka nwere ekele maka mgbọrọgwụ ya nke Zimbabwe. Site n’ihe dịka o siri dị, nna ya, nne ya na nwanne ya nwoke nke okenye ha niile emeela nhọrọ doro anya nke ịghara ịchọ ka ọha na eze mara ha.
Nna Reiss Nelson: Obere ihe amacha banyere nna ya Zimbabwe, ọbụnadị aha ya. Otú ọ dị, dị ka ebe nrụọrụ weebụ Arsenal, Reiss nyere nna ya ụfọdụ otuto maka ime ka ọ daa.
Reiss Nelson's Mama: N'ịtụgharị uche n'oge ọ bụ nwata, otu n'ime ihe ncheta kachasị mma nke Reiss bụ nke na-eche banyere nne ya.
Ọ bụ oge ọ ga-arụsi ọrụ ike iji zụta ya Thierry Henry's Uwe nke ọ na-eyi kwa ụbọchị n'ụlọ akwụkwọ, nnọkọ oriri na ọ andụ andụ na egwu na pitch. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nwa nwoke nwere nnabata miri emi.
Reiss Nelson makụọ mama ya.
Issmụnne Reiss Nelson: Dabere na Ebe nrụọrụ weebụ Arsenal, e nyere nwanne ya nwoke nke okenye otuto maka ịhapụ ndụ mmekọrịta ya iji nyere nwanne ya nwoke nke obere aka imezu nrọ ya. Nwanne ya nwoke nke okenye ka na-amaghị aha ya (aha ya-amaghị) chụrụ ihe dị ukwuu iji nweta Reiss ebe ọ nọ taa.
Mgbe ọ bụla Reiss na-aga oriri na abalị n'abalị Fraịde, nwanne ya nwoke nke okenye ga-ahụ na ọ na-ezu ike nke ọma tupu mmalite izu ụka amalite.
Nwanne ya nwoke nke okenye ga-akpọrọ ya gaa n'ụgbọ okporo ígwè maka nkuzi agụmakwụkwọ, mbubreyo ye ntọn̄ọ ntọn̄ọ.
Kpakpando bọlbụ bụ nwoke na-ahụ n'anya na-enwe obi ụtọ na-enwe obi ụtọ, na-emefu ego ya na ibi ndụ ya n'ụzọ zuru oke. Mgbe ụfọdụ ọ na - ahọrọ ịnya ịnya ụgbọ mmiri na ebili mmiri nke oke osimiri karịa ịnwe ụgbọ ala ya n'okporo ụzọ. Nke a chịkọtara ụdị ndụ ya pụrụ iche.
Eziokwu ndụ Rees Nelson.
Reiss Nelson Eziokwu efu:
Ezigbo Ndị Enyi Ya: Ebube si Jadon Sancho, Reiss nwere ezigbo ndị enyi ya abụọ bụ Eddie na Joe. Boysmụ nwoke niile gara ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal wee nwee ihe ịga nke ọma na ahịa ha.
Imata ezigbo ndi enyi Reiss Nelson. Eddie (Aka ekpe) na Joe (Aka nri)
Religion: Reiss Nelson aha etiti “Luke”Na-egosi na ọ bụ Onye Kraịst site n'okpukpe ma nwee ike nwee okwukwe na Katọlik. ''Luke'bụ onye dere akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, ọ bụkwa aha Oziọma nke atọ na Agba Ọhụrụ.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ akụkọ Reiss Nelson Childhood ya na Ihe Odide Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.